नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : मलेसियामा नेपालीलाई यसरी कुटी कुटी मार्दा पनि नेपाल सरकार भन्छ कोही नेपाली मारिएका छैनन, कठै असफल राष्ट्रको जनता हुनुको पिँडा हेर्नुस् त ! यो भिडियो हेरेपछी भन्न मन लाग्यो थुक्क नेताहरु ! नेपालीको भाग्य भबिस्य यस्तो बनाएर रेमिट्यान्सको भर मा देश चलाऊन र तिम्रा नौटँकीहरु मँचन बाहेक तिमीहरुको के औकात ???!!!
मलेसियामा नेपालीलाई यसरी कुटी कुटी मार्दा पनि नेपाल सरकार भन्छ कोही नेपाली मारिएका छैनन, कठै असफल राष्ट्रको जनता हुनुको पिँडा हेर्नुस् त ! यो भिडियो हेरेपछी भन्न मन लाग्यो थुक्क नेताहरु ! नेपालीको भाग्य भबिस्य यस्तो बनाएर रेमिट्यान्सको भर मा देश चलाऊन र तिम्रा नौटँकीहरु मँचन बाहेक तिमीहरुको के औकात ???!!!
हामीलाई मलेसियाबाट नेपालीहरुले दिएको जानकारी अनुसार मलेसियामा अस्तिको घटनामा थुप्रै नेपालीहरु निकै अन्यायपुर्बक मारिएका छन । उनिहरुका अगाडिबाट मलेसियाको पुलिसले लाश उठाएको उनिहरुले देखेका छन तर नेपाल सरकारको कोही मरेका छैनन भन्ने जानकारी सुनेर अहिले उनिहरु जिल खाएका छन । नेपालीहरुले नेपाल मदरलाई पठाएका भिडियो फोटो जस्ताको तस्तै तल प्रस्तुत छन । तर कती मारिए, कती बेपत्ता पारीए, कती घाइतेछन स्वतन्त्र रुपमा पुस्टि हुन बाँकी छ । त्यहाको प्रहरी मुक दर्शक भएर नेपाली माथि बर्बरता हुन दिएको स्थानिय प्रत्यक्ष दर्शी नेपालीहरुको आरोप छ ।
(नेपाल मदरको भनाइ : हामीले त्यहाको घटनाको पूर्ण विवरण ल्याउन प्रयासरत छौं तर आधिकारिक जानकारी पाउन सकेका छैनौ, मलेसियामा उक्त घटनाका प्रत्यक्ष दर्शी नेपाली मित्रहरु, तपाईंहरु आफ्नो जिउ ज्यानको सुरक्षा मा ध्यान दिनुहोला पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा घटना मा जे भएको हो त्यो भन्दा अतिरन्जित हुनेगरी जानकारी दिने, समाचार, फोटो नपठाउनुहोला, सत्य घटनालाई नेपाल मदर ले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्ने नै छ । जे भएको हो त्यही जानकारी पठाउनुहोला । नेपाल सरकार र त्यहाको राजादुताबास कृपया छिटो भन्दा छिटो घटनाको यथार्थ जानकारी प्रकाशनका लागि अनुरोध छ ।)
Posted by www.Nepalmother.com at 9:40 PM